Valve SteamVR 1.7: kuvhura kukuru nenhau dzinonakidza | Linux Vakapindwa muropa
Valve SteamVR 1.7: kuvhura kukuru nenhau dzinonakidza
Valve inoenderera nezvayo yakavhurika-sosi mapurojekiti ekutamba. Yakaunganidza mijenya yekuvandudza pane ese achangoburwa beta kubudiswa kwe yako itsva SteamVR, yechokwadi chaiyo. Ichi chishandiso chine chinangwa chekuunza yakawanda uye zvirinani ruzivo rweVR. Nemagadziriso azvino, ruzivo rwevashandisi rwunowanikwa, nekuti zvese zvave nyore kuti ive nekureruka kwekushandisa. Uye zvakare, kune zvakare kutsva kuvandudzwa maonero eVR skrini.
Iyi shanduko nyowani inosanganisira iyo nyowani docked preview uye yakazara skrini mode. Mifananidzo dzinoverengeka dzakagadziridzwa futi, uye zvinounza kuvandudzwa kwekukwirisa DPI rutsigiro uye nedzimwe shanduko diki. Ikozvino kune nyowani yekupenya yekudzoreredza kuitira kuti igadziriswe kubva kuheti kusvika ku Valve HMD Index. Iyo firmware yakagadziridzwa kugadzirisa zvimwe zvakapfuura matambudziko neiyo screendoor.
Eheka yakawanda tsikidzi dzakagadziriswa izvo zvaive mumavhezheni apfuura eSteamVR, SteamVR Imba, SteamVR Input, Lighthouse, nezvimwe, pamapuratifomu akasiyana siyana ayo SteamVR yakaburitswa.
Y havana kukanganwa iyo Linux nyika, iyo SteamVR 1.7 chiitiko che distros chakagadziridzwa zvakare. Dzimwe dzeshanduko dzeLinux dzinosanganisira dzinoverengeka dzakagadziriswa nyaya dzinokanganisa mashandiro, kusimudzira kune IVRCompositor :: GetFrameTiming () iyo yakashuma yakaipa data kana asynchronous mode yagoneswa. Zvakare yakagadzirisa tsaona yakaitika apo asynchronous modhi yakagoneswa, kudzikisa CPU kushandiswa kana asynchronous kuzvidzwa kwakaremara, uye kumwe kuparara panguva yekutanga.
Kana iwe uchida download uye edza Valve's SteamVR, unogona kuzviita kubva pane izvi chirongwa chinobatanidza. Iwe unotoziva kuti inoenderana neakasiyana chaiwo magirazi echokwadi, senge Valve Index pachayo, Windows Mixed Reality, uye zvakare yeakakurumbira Oculus Rift uye HTC Vive.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Graphics » Valve SteamVR 1.7: kuvhura kukuru nenhau dzinonakidza
GNU gcc 10: yemahara compiler inovandudzwa